Euthyphron အကြောင်း (၁)
Euthyphron ရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာက ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှု (Piety) ပဲ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Euthyphron ထဲမှာ ပလေတိုရဲ့ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှု အပေါ် ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြောချင်တာက သူ့ရဲ့ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှု အပေါ်မှာရှိတဲ့ အပြီးသတ်အမြင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအရေးအသားထဲမှာ ပလေတိုရဲ့ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှု အပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆင်ခြင်ထားတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုကို တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် Euthyphron ကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ပလေတိုသိခဲ့တဲ့ အမှန်တရား (Truth) အပြည့်အဝကိုတော့ တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ အမှန်တရား ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပဲ တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ အချိန်တည်းမှာပဲ အမှန်တရား ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆိုတာဟာ အမှားရဲ့ (Untruth) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့လည်း ဆိုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီအရေးအသားကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ပလေတိုသိခဲ့တဲ့ အမှန်တရား အပြည့်အဝကို ကျွန်တော်တို့ မတွေ့နိုင်ရင်တောင်မှ Euthyphron မှာ ပြခဲ့တဲ့ အမှန်တရား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို နားလည် ကျေညက်ပြီးမှသာ ပလေတိုသိခဲ့တဲ့ အမှန်တရား အပြည့်အဝကို တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။ “Euthyphron မှာ” ထက်စာရင် “Euthyphron ကတဆင့်” လို့ပြောရင် ပိုမှန်လိမ့်မယ်။
Euthyphron ကတဆင့်ပြခဲ့တဲ့ အမှန်တရားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (Half-truth) က သမာရိုးကျအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ အမှန်တရားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မဟုတ်ဘူး။ သမာရိုးကျအဖြစ်ဆုံး အမှန်တရားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွေဆိုတာ အများက လက်ခံထားတဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ (Opinion) ကို ဖော်ပြတယ်။ Euthyphron ကတဆင့် ပြထားတဲ့ အမှန်တရား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက အများက ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ခံထားတဲ့ အမှန်တရားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီအမှန်တရား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာ သာမန်အားဖြင့် လက်ခံထားတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ကသိကအောက်နိုင်တယ် (Irritating)။ ဒါပေမယ့် တနည်းအားဖြင့် ကသိကအောက်နိုင်တဲ့ အမှန်တရားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဟာ သမာရိုးကျ အမှန်တရား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထက်သာတယ်။ ကသိကအောက်နိုင်တဲ့ အမှန်တရားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရဖို့အတွက် အနည်းငယ် အားစိုက်ထုတ်ရတယ်။ စဉ်းစားရတယ်။ အဲတော့ Euthyphron ကိုဖတ်ပြီး စဉ်းစားခန်းဝင်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးရလာတဲ့ ရလဒ်က ကသိကအောက်ဖြစ်စရာ ယာယီအဖြေပဲဆိုရင်တော့ သိပ်တော့ ကျေနပ်စရာမကောင်းလှဘူး။ ဒါကို နှစ်သိမ့်လို့ရတာ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ပထမက စဉ်းစားခြင်းဆိုတာကိုကကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ ယူဆလို့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုက စဉ်းစားခြင်းဆိုတာ ဘယ်လိုပဲကျေနပ်စရာကောင်းပါစေ နောက်ဆုံးရလဒ်က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့သာ ယူဆမယ်ဆိုရင် ပလေတိုရဲ့ စရိုက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှု အကြောင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့အမြင် သို့မဟုတ် အမှန်တရားဟာ လုံးဝကျေနပ်စရာကောင်းမှာဖြစ်ပြီး ကသိကအောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆနိုင်တယ်။
Euthyphron ဆိုတာ ယူသိုင်ဖရွန်နဲ့ ဆိုကရေးတီးတို့အကြား ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှု အကြောင်း စကားဝိုင်းဖြစ်တယ်။ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှု ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် သုံးခုကို အဆိုပြုထားပြီး သုံးခုလုံး မလုံလောက်ကြောင်း ပြထားတယ်။ ဒိုင်ယာလော့ရဲ့ အဆုံးကို ရောက်တဲ့အခါမှာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်။ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှု ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တုိ့မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုဆိုတာ လူတိုင်းမသိဘူးလား။ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းတယ်ဆိုတာ မိရိုးဖလာ နတ်၊ ဘုရားတွေကို မိရိုးဖလာ ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း ကိုးကွယ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုဆိုတာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်း (virtue/excellence, ᾰ̓ρετή) တစ်ခုလည်း မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါဆိုရင် ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခု မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုဆိုတာ တကယ်ကောင်းတာလား။ မိရိုးဖလာ နတ်၊ ဘုရားတွေကို မိရိုးဖလာ ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း ကိုးကွယ်တာဟာ ကောင်းသောအရာတစ်ခုလား။ Euthyphron ထဲမှာ ဒါကို မဖြေထားဘူး။ ပိုပြီးတိတိကျကျ ပြောရရင် Euthyphron ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆွေးနွေးချက်ထဲမှာ မဖြေထားဘူး။ ဒါပေမယ့် ပလေတိုရဲ့ ဘယ်ဒိုင်ယာလော့မဆိုမှာ ဆွေးနွေးချက်ဆိုတာဟာ ဒိုင်ယာလော့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ logos လို့ခေါ်တဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေ၊ စကားလုံးတွေကတစ်ပိုင်း၊ ergon လို့ခေါ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဒိုင်ယာလော့ထဲမှာ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာတွေ၊ ဇာတ်ကောင်တွေ ဘာလုပ်နေသလဲ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာတွေက တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်။ အဆုံးမှာ logos အရ နှုတ်ဆိတ်နေပေမယ့် အဖြစ်အပျက်တွေက စကားလုံးတွေနဲ့ဖုံးထားတာကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။
ဆိုကရေးတီးနဲ့ ယူသိုင်ဖရွန်တို့အကြား စကားဝိုင်းဟာ ဆိုကရေးတီးကို ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုမရှိဘူးလို့ စွတ်စွဲခံရပြီးနောက်မှ ဖြစ်တယ်။ ဒိုင်ယာလော့ထဲမှာလည်း ဒီအဖြစ်အပျက်၊ ဒီအချက်ကို ညွှန်းဆိုထားတာတွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရမှာက ဆိုကရေးတီးဟာ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ယောက်လား၊ ဆိုကရေးတီးအနေနဲ့ မိရိုးဖလာ နတ်၊ ဘုရားတွေကို မိရိုးဖလာ ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း ကိုးကွယ်သလားဆိုတာပဲ။ ဒီတော့ Euthyphron ထဲမှာ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုအကြောင်း နှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်။ ပထမက ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးချက်၊ ဒုတိယက ဆိုကရေးတီးရဲ့ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအကြောင်း ဖော်ပြချက်။ ဒီနှစ်ခုကို ကြည့်လိုက်ရင် သီးသန့် အကြောင်းအရာ အမျိုးအစားနှစ်ခုလို့ ထင်ရတယ်။ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ဒဿနဆိုင်ရာမေးခွန်းဖြစ်ပြီး ဆိုကရေးတီးက ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းသူလားဆိုတဲ့မေးခွန်းက ဒဿနဆန်တာထက် အတင်းအဖျင်းပိုဆန်တယ်။ ဒါဟာ တနည်းအားဖြင့်မှန်တယ်ဆိုပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကို ထည့်မစဉ်းစားထားဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တကယ့်ဒဿနမေးခွန်းက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှု ဟာ virtue လား ဆိုတာပဲ။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှိနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာအလျောက် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းတွေအားလုံးရှိထားတဲ့သူဟာ ဖီလိုဆိုဖာ (philosopher) ပဲ။ ဒါကြောင့် အကယ်၍သာ ဒဿနပညာရှင်ဟာ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ယောက်ဆိုရင် ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆိုကရေးတီးက ဒဿနပညာကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒီတော့ ဆိုကရေးတီးကသာ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းသူဖြစ်ရင် ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းပဲ။ သူကသာ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းသူ မဟုတ်ခဲ့ရင် ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဆိုကရေးတီးက ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းသူ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ အတင်းအဖျင်းမေးခွန်းကို ဖြေခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒဿန မေးခွန်းကို ဖြေလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ Euthyphron ထဲမှာ ဆိုကရေးတီးရဲ့ ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းမှုအကြောင်း ဘာတွေ တွေ့နိုင်မလဲ ကြည့်ရအောင်။
ငါ့ ခြေလက်တွေ ထိန်းမရအောင် ကခုန်လျှက်
PHAEDO / ပလေတို၏ ဖိဒလ ဇာတ်ထုပ် (၁)
ပလေတိုရဲ့ ဖီဒိုကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ပထမတစ်ခေါက်နဲ့ တစ်နှစ်တိတိ ခြားတယ်။ ကျွန်တော့်အထင် ပလေတိုရဲ့ စာမျိုးဟာ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း ပြန်ဖတ်ကြည်သင့်တဲ့ စာအုပ်မျိုးတွေလို့ ထင်တယ်။ ပထမတစ်ခေါက်နဲ့ ဒုတိယတစ်ခေါက် နားလည်ပုံချင်းသာကွာတာမဟုတ်ပဲ အသိသစ်တွေပါ ပိုပြီးရတာ တွေ့ရတယ်။ ဖီလိုဆိုဖီမှာ တခြားဘာသာရပ်တွေလို စာအများကြီး ဖတ်စရာမလိုဘဲ တစ်အုပ်ထဲကို အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ပြီး ထပ်ကာထပ်ကာစဉ်းစားလို့ရတာ ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်တယ်။ အခု ဖီဒိုကို ဒုတိယအကြိမ် ဖတ်ပြီး ကိုယ်နားလည်မိသလောက် ပြန်ရေးကြည့်ထားတယ်။ အခုလိုရေးတာဟာ မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေကို ဒီဟာဒီလိုရှိတယ်ကွ ဆိုပြီး ဆရာလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘဲ ဖတ်ပြီးသားသူတွေနဲ့ နားလည်ပုံချင်း ဖလှယ်ချင်တာ ဖြစ်တာကြောင့် ဖီဒို မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေ အရင် ဖတ်ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဖီဒိုကို 360 ဘီစီလောက်မှာ ရေးတယ်လို့ ယူဆရတယ်။ ပလေတို ဒီစာတွေရေးတဲ့အချိန်မှာ ဆိုခရေးတီးက သေပြီးသွားပြီ။ ဇာတ်လမ်းက အေသင်သား မောင်ဖီဒို Phlius မြို့ရောက်နေတုန်း သူ့ကို ဆိုခရေးတီး သေသွားတဲ့အကြောင်း ဝိုင်းမေးကြလို့ ဖီဒိုက နောက်ကြောင်းပြန်တာပဲ။ ဆိုခရေးတီး မသေခင် နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သူလည်းရှိနေတယ်။ ပြောရရင် ဒီ ဇာတ်ထုပ်က ဆိုခရေးတီးရဲ့ နောက်ဆုံးစကားတွေပဲ။ ဒီတော့လည်း ပြောကြတဲ့ အကြောင်းအရာက သေခြင်းတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေပဲ။ သေရတော့မယ် ဆိုတာတောင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သေခြင်းတရားအကြောင်း ဆွေးနွေးနေနိုင်တဲ့ ဆိုခရေးတီးဆိုတာ စံပြတွေးခေါ်ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဆိုခရေးတီးရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပညာအပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားကို Apology မှာ ပိုပြီးတွေ့ရတယ်။ ထားတော့။ ဖီဒို အကြောင်းပဲ ပြောရအောင်။
ဖျားနေတယ်။ အခုလိုဖျားနာနေတော့လည်း ကိုယ့်မှာ ခန္ဓာကြီးကို လွယ်ထားရလို့ ဒုက္ခဆိုတာ လိုက်လာတာပါလားဆိုပြီး သဘာဝတရားကြီးကိုတောင် အပြစ်ဖို့ချင်သေးရဲ့။ အမှန်ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ မဆင်မခြင် သောင်းကျန်းပြီး ဖြစ်တာပါ။ သောက်စားမူးယစ်တာတွေ များတော့လည်း ဘယ်ခံနိုင်တော့မလည်း။ အခုလို ဖျားတိုင်း နောက်ဆို ကျန်းမာအောင် နေတော့မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးဝင်မိတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေရမှာလည်း ကြောက်သေးတာကိုး။ အို၊ နာ၊ သေ ဘေး ပြေးမလွတ်ဘူးလို့ ပြောကြတယ် မဟုတ်လား။ သေပြီး ပြီးတာပဲကွာလို့ ကိုယ်တွေ တွေးကြည့်ထားသလို မှန်နေရင်တော့ အကြောင်းမဟုတ်၊ (သေတယ်ဆိုတာကလည်း တွေးကြည့်လို့ပဲရတာမျိုး) အဘိဓမ္မာဆရာများ ပြောသလို နောက်ဘဝဆိုတာတွေ ရှိနေမှ အခက်။ မသကာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အိမ်သာမှာ ပက်ကျိသွားဖြစ်နေ ဘယ့်နှယ့် လုပ်မတုန်း။ ဖျားတဲ့ နာတဲ့အချိန် အဲဒါတွေ တွေးကြည့်ပြီးတော့လည်း ပူမိတတ်သေးတယ်။ ဒီတော့လည်း ငါ နောက်ဆို ဆင်ခြင်မှဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးက ဝင်လာပြန်ရော။
ဆင်ခြင်တယ်ဆိုလို့ နောက်ဘဝ ပက်ကျိဖြစ်မယ့်အရေး တွေးပူပြီး ဝိပဿနာဥာဏ်စဉ်တွေ ဆင်ခြင်လိမ့်မယ်လို့ မထင်လိုက်နဲ့ဦး။ ဒါမျိုးက ပါရမီထက်သန်ပြီး ပညာဥာဏ်သမ္ဘာ အင်မတန်ရင့်ကျက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှ နားလည်နိုင်တာမျိုး။ ကိုယ်တွေ တတ်ထားတဲ့ ဆိုကရေးတီးသည် သေမျိုးဖြစ်သည် ဆိုတဲ့ လော့ဂျစ်လောက်နဲ့ ဘယ်ရမှာတုန်း။ ဒီတော့ကာ ကိုယ်ဆိုလိုတဲ့ ဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ၊ ထပ်ရှင်းရပြန်တော့တယ်။
Immigration က ထွက်လာမလို့လုပ်တော့ သူကလက်လှမ်းပြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း လက်ထောင်ပြလိုက်ပြီး ခဏစောင့်လို့ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ လေယာဉ်စီးလာတဲ့ တစ်ယောက်ကို နှုတ်ဆက်နေတာ။ ယဉ်ကျေးတဲ့ တိုင်းပြည်ကလူတွေက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မနှုတ်ဆက်ပဲ လမ်းမခွဲကြဘူးမဟုတ်လား။ လေးစားတဲ့သဘော၊ အသိအမှတ်ပြုတဲ့သဘော၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်လို့ ပြတဲ့သဘောပဲ။ နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ ထွက်လာတော့ သူက လမ်းလျှောက်လာပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ပြောတယ်။ နင်ဒီအင်္ကျီဝတ်တုန်းပဲလားတဲ့။ သူပြောတော့မှပဲ သတိထားမိတယ်။ အခုဝတ်လာတာ မနှစ်က သူလက်ဆောင်ဝယ်ပေးတဲ့ အင်္ကျီ။ ငါကနင့်လို သူဌေးသမီးမဟုတ်တော့ ဒီလိုဈေးကြီးတဲ့ အင်္ကျီမျိုး အများကြီးမဝယ်နိုင်ဘူး။ ခဏခဏ ပြန်ပြန်ဝတ်ရတယ်။ လို့ ပြောလိုက်တော့ သူက ရယ်တယ်။ နောက် ကျွန်တော်ကပဲ နင်အရပ်ရှည်လာတယ် လို့ပြောလိုက်တယ်။ သူက မျက်စောင်းထိုးကြည့်ပြီးတော့ လျှာမရှည်နဲ့ သွားမယ်ဆိုပြီး လှည့်ထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော် ရယ်ပြီး သူ့နောက်ကို လိုက်သွားတယ်။ သူနဲ့ ယှဉ်ပြီးလျှောက်ရင်းနဲ့ သူ့ကို ဘာနဲ့သွားကြမှာလဲ၊ တက္ကဆီနဲ့လား လို့မေးလိုက်တော့ သူက ငါ့မှာ ကားပါတယ်ဆိုပြီး ကြွားတဲ့သဘောနဲ့ ကားသော့ကို လက်ညှိုးမှာလှည့်ပြတယ်။ ကျွန်တော်က အော် နင်တောင် ကားမောင်းတတ်ပြီကိုး၊ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေ အလုပ်များတော့မှာပဲလို့ ပြောလိုက်တော့ သူက ရယ်တယ်။ ကျွန်တော်က အမြဲသူ့ကို ဒီလိုပဲ စ,နေကြ။ နင်ဟာလေ လို့ ပြောပြီး ဘာမှဆက်မပြောဘူး။ ပြီးတော့မှ ဟိုမှာရောက်ပြီလို့ ပြောပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက အနက်ရောင် ကားတစ်စီးကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အိတ်ကို ကားနောက်ခန်းမှာထည့်ပြီး အရှေ့ခန်းမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။
ကားမောင်းလာတော့ အရှေ့ခန်းမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေပြီး မြို့က လမ်းတွေကို ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ပြီးမှ သူ့ကိုလှည့်မကြည့်ပဲ အန်ကယ်တို့ကော နေကောင်းရဲ့လားလို့ မေးလိုက်တယ်။ သူက အင်း လို့တိုတိုပဲ ပြန်ဖြေတယ်။ သူ့ကိုလှည့်ကြည့်တော့ ကားမောင်းတဲ့ လမ်းမှာ အာရုံစိုက်နေတဲ့ပုံပဲ။ မောင်းလေ့မရှိသေးတဲ့သူတွေ မောင်းတဲ့ပုံစံမျိုး။ ကျွန်တော်လည်း ဒက်ရ်ှဘုတ်ထဲမှာတွေ့ကို စီဒီတစ်ချပ်ကို ထည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ The Beatles အယ်လ်ဘမ်တစ်ချပ်ပဲ။ ကျွန်တော်ကြိုက်တတ်မှန်းသိလို့ သူတမင်ထည့်ထားတာဖြစ်မယ်။ သူက အမြဲတမ်း အလုပ်လုပ်ရင် အဲလို ကြိုတွေးပြီး လုပ်နေကြ။ သူ့အမေဆီက ရတဲ့ အမွေလို့ဆိုရမယ်။ သူ့အမေကြီးက စီးပွားရေးသမား။ အောင်မြင်တယ်၊ ကွက်ကျော်မြင်တတ်တယ်။ အရာရာဟာ အကျိုးကြောင်းသင့် စီစဉ်တကျ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို လက်ခံထားတဲ့ လူစားမျိုး။ ကျွန်တော်လည်း သီချင်းနားထောင်ရင်း မြို့ကိုငေးကြည့်နေတယ်။ မြို့ကတော့ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး။ ဒီလမ်းတွေ ဒီအရောင်တွေပဲ။ ကျွန်တော်က သူတို့မြို့ကို တစ်နှစ်တစ်ခါလိုလို လာနေကြ။ ရန်ကုန် နွေအပူဒဏ်ကို ရှောင်တဲ့သဘောရယ်၊ အပန်းဖြေခရီးထွက်တဲ့သဘောမျိုးရယ်ပဲ။ လာရင်လည်း အမြဲတမ်းသူတို့အိမ်မှာပဲ တည်းတယ်။ အဖေက သူ့အဖေကြီးနဲ့ ရင်းနှီးတယ်။ ကျွန်တော် ခရီးထွက်ချင်တယ်ပြောတော့ အဖေက သူတို့ အိမ်မှာတည်းကွာဆိုပြီး လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာ။ နောက်နှစ်တွေကျတော့လည်း သူတို့အိမ်နဲ့ ရင်းနှီးသွားတော့ အဖေပြောစရာတောင် မလိုတော့ဘဲ အဲဒီမှာပဲ တည်းဖြစ်သွားတယ်။
Death is one of the most mysterious things on the universe. It is asked by many people and many thinkers butacertain answer is never known. There are many questions left unanswered in curious minds of human. What is death like? Is there life after death? What will happen if you die? Do you suffer death or do you suffer just pain? Now, I will try to explore the most important questions about death in this paper. Is there life after death? My response will be “No”. I believe there is no life after death.
I even find the question itself is somewhat ridiculous. If we take the meaning of “death” in common sense, it means “the end of life.” Therefore, the question become “Is there life after the end of life?” (Rosenberg, 30) The answer will be obviously no. It is like saying “What happens in the movie after it ends?” which is nonsense. Even if we change the question to something like “Do I have life after death?” or “Will I live after death?” it is stillanonsense question. Therefore, we need to clarify the notions “I” and “death”. What do they exactly mean? What exactly isaperson? How do we define death?
အမှတ်တမဲ့ဆို အင်မတန် ပျင်းဖို့ကောင်းတဲ့ စာအုပ်လို့ ထင်ချင်စရာပဲ။ ထူကလည်း အထူကြီး။ ဘာသာရပ်ကလည်း Political Economy ဆိုတော့ scholar တွေအတွက်ပဲ ရေးထားတယ်လို့ ထင်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ရက်လောက် အချိန်ပေးဖတ်လိုက်တော့ အရသာ တွေ့သွားတယ်။ Academic တွေသာ အဖတ်များတယ်ဆိုပေမယ့် သာမန် လူပိန်းနားလည်အောင် ကောင်းကောင်းရေးထားတယ်။ ဟော့ကင်းရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ Brief History of Time လိုမျိုး ဒီစာအုပ်မှာ သမိုင်းကို သက္ကရာဇ်တွေနဲ့ မရှုပ်ထွေးအောင်၊ စီးပွားရေးကို ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ မျက်စိ မနောက်အောင် ရေးထားတယ်။ ဖတ်ရတာ အရမ်းကြီး မလေးသလို ပေါ့ရွှတ်ရွှတ် အပေါ်ယံတွေချည်းပဲလည်း မဟုတ်ဘူးရယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး နိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ဘယ်လို ပြောင်းလဲသလာပြီးတော့ အခုအခြေအနေထိ ဘယ်လို ဖြစ်လာသလဲဆိုတာ ခြေရာခံထားတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ ထူးခြားတာက သမိုင်းကို personal level အထိ လျှော့ချထားတာပဲ။ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ကံကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရာမှာ နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ policy maker တွေရဲ့ အရေးကြီးပုံကို တွေ့နိုင်တယ်။ ဖတ်ရတဲ့ အခန်းတိုင်းမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်တွေက အဲဒီခေါင်းဆောင်တွေပဲ။ သူတို့ရဲ့ နောက်ကြောင်းတွေ သူတို့ကို လွှမ်းမိုးတဲ့ ideology တွေ အကြောင်းပဲ ရှင်းပြသွားတယ်။ ဒီထဲမှာ တစ်ခု သတိရမိတာက အပြောင်းအလဲတစ်ခု (ဥပမာ တော်လှန်ရေးတစ်ခု ဆိုပါတော့) စဖြစ်ဖို့ရာ လိုအပ်ချက် သုံးခုရှိတယ်။ Idea ရယ်၊ စလုပ်မယ့် “လူ” ရယ်၊ အဲဒီသူ စ,နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေရယ်ပဲ။ အဲဒီ သုံးခုစလုံး ပြည့်စုံမှသာ အပြောင်းအလဲဖြစ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။